Uru nke ozi ịntanetị kpatara | Martech Zone
A na-ejikarị ozi ịntanetị maka ịzụ ahịa ahịa ma bụrụ otu ozi na-ọtụtụ. N'ime ụlọ ọrụ, a maara nke ọma dị ka ogbe na gbawara. Oge izizi ruru onye zitere ya. Email akpalite dị iche, na ijikọta ndebiri omenala na data onye ọrụ iji zipu ozi email mgbe otu ihe mere mere. Ihe omume akpata ozi-e. A na-eziga ozi ịntanetị na-akpali akpali site na usoro nkwado ma ọ bụ jiri ndị na-eweta ọrụ email na-abụkarị site na API nhazi.
Systemsfọdụ usoro akpaaka ahịa dị ka ndị ahịa anyị, Right Na mmekọrịta, na-enye ohere iji chepụta usoro niile nke izipu ozi iji duru ndị mmadụ gaa na saịtị gị. Ọ bụ ezie na mkpọsa ozi na-akpata na-ahaziri nke ọma ma dị mgbagwoju anya, uru ya dị oke mkpa. Ebe ọ bụ na ha na - emekarị n'ihi ihe omume - enwere ike izipu ha na oge na izi ezi iji ruo onye ahụ n'oge kwesịrị ekwesị, yana ozi ziri ezi, n'oge kwesịrị ekwesị. Nke a pụtara mmelite na ọnụego ntụgharị na mmelite ndị ahịa ka mma.
The Email Monks gbagote na ihe na-akpali akpali infographic na triggered ozi ịntanetị. Ha bu ezigbo ndi mmadu - na - enyere anyi aka imeputa ufodu ndi mara mma CircuPress. Pịa site na Infographic iji hụ zuru ezu, ihe ọmụma mmekọrịta!
Tags: email akpaakaemail apintughari emailozi emailkpaliri email